Ugo na mmekorita – College Ernest Bevin
Mahadum Ernest Bevin na-enweta otuto maka ọrụ ọ na-arụ dị ka ụlọ akwụkwọ site na ọtụtụ ụlọ ọrụ dị iche iche dị na mpụga ma na-arụ ọrụ na mmekorita ya na ndị otu iji meziwanye usoro agụmakwụkwọ kọleji nwere ike inye ụmụ akwụkwọ..
Comlọ Mgbakọ Britain
Ernest Bevin kọleji bụ Comlọ Akwụkwọ Nkwado Akwụkwọ Nkwuputa Ndị Britain kwadoro. BCS bụ Chartered Institute maka IT ma gbaa mbọ na-eme IT ka ọ bụrụ maka mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Pịa Ebe a to find out more.
Andlọ Akwụkwọ Nkụzi Wandle
Otu onye otu Wandle Te School School Alliance, mmekorita mmụta nke imekọ ihe mebere 37 ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ndị dabeere na London na Wandsworth.
The kọleji bụ ụlọ akwụkwọ ikikere nke STARS maka Atụmatụ Njem Travellọ Akwụkwọ nke chọrọ ịbelata mkpọchi, melite nchekwa okporo ụzọ ma melite ahụike na ịdị mma na London.
Iji chọpụta ihe ndị ọzọ pịa Ebe a.
N’ọnwa Ọktọba 2017, Wandsworth Borough Council, rụrụ Ahụike ha kwa afọ & Nnyocha nchekwa nke kọleji Ernest Bevin. Nnyocha ahụ hụrụ ụlọ akwụkwọ ahụ na-enweta n'etiti nnabata zuru ezu na 91-100% nke edemede. Nke a na-etinye Ernest Bevin n'ọkwa kachasị elu 'Ezigbo mma' na 2-3 ụdị dị elu karịa ọtụtụ ụlọ akwụkwọ.
Erlọ Akwụkwọ Ernest Bevin na-arụkwa ọrụ na ndị otu egwuregwu a iji meziwanye usoro egwuregwu ahụ na-enye ụmụ akwụkwọ kọleji ahụ..
Egwuregwu Greenhouse Sports na-arụ ọrụ na kọleji site na ịnye ndị nkuzi ọkachamara na Judo na Table Tennis.
Tinggba mbọ & Mitcham United FC
Tinggba mbọ & Mitcham United FC gbara ụlọ akwụkwọ mmụta dị na Ernest Bevin College. Ndị na-egwu egwuregwu mezuru ọmụmụ akwụkwọ nke isii ha na kọleji tinyere nkuzi ha na ịgba bọl na klọb.
Iji chọpụta ihe ndị ọzọ pịa Ebe a
Na mmekorita ya na Twenty20 Community Cricket, Nlọ Akwụkwọ Ernest Bevin na-agba alọ Akwụkwọ Ọmụmụ Ihe Ego nke isii. Studentsmụ akwụkwọ nwere ike ijikọ ma cricket na ọmụmụ post-16 ha.